Arakaraka ny hankalazanao sy hankalazanao ny fiainanao no vao mitoetra mankalaza ny fiainanao. - Oprah Winfrey - Quotes Pedia
Fitahiana ho antsika rehetra ny fiainana. Dia fitsangatsanganana tsy ampoizina izay manana anjara amin'ny fiakarana sy ny faharavany. Manana ny hafalian'ny reny eto an-tany sy ny fifandraisantsika isika rehefa mihalehibe.
Raha mibanjina manodidina ianao, dia ho taitra amin'ny halavan'ny zavatra izay betsaka kokoa noho ny rehetra ianao. Tsy vovoka ihany isika fa vovoka eto amin'izao tontolo izao, kanefa afaka manao betsaka be isika. Tokony hanao araka izay fara herintsika amin'ny fiainantsika isika ary miaina izany amin'ny fomba mahasoa indrindra.
Indray mandeha fotsiny isika dia mankalaza ny tena izy. Saingy raha mianatra mankasitraka sy mankalaza ireo zavatra kely amin'ny fiainana matetika kokoa isika, dia angamba ho lasa tsara sy falifaly kokoa amin'ny fiainana isika rehetra. Tsy maintsy mianatra mahita ny tsara amin'ny hafa isika ary midera azy. Izany dia mamporisika ny hafa hanohy ny asa tsara sy hanao dingana hafa amin'ny lalana tsara.
Rehefa midera sy mankalaza ny fiainanao matetika kokoa ianao dia mahita zavatra maro azonao tadiavina hanandrana. Izany dia mitarika traikefa bebe kokoa izay manamboatra antsika ho tonga olombelona matotra bebe kokoa. Noho izany, dia mahita antony sy tranga bebe kokoa hankalazantsika isika.
Mahafinaritra kokoa ny fiainana. Rehefa mankalaza sy midera ny fiainantsika manokana isika dia mahatsapa hoe tena mahazo tombony tokoa isika. Anjarantsika amin'izay ny manampy ny hafa izay mila fanampiana. Manatsara ny fiainan'izy ireo izany ary ho fanatsarana ny fiaraha-monina. Raha afaka mamolavola fisainana ara-tsaina isika dia afaka miaina fiainana amim-pankasitrahana sy mahavokatra.
Teny mahafinaritra amin'ny fiainana
Ankalazao ny Quotes fiainana
Ankafizo ny resaka Quotes
Quotes malaza momba ny fiainana
Fanentanam-panahy momba ny fiainana
Teny fanentanam-panahy amin'ny fiainana
Fomba fiaina hiainana amin'ny
Teny momba ny fiainana tsara
Teny momba ny fiainana
Teny fohy momba ny fiainana
Ataovy izay tsy maintsy atao mandra-pahafatinao ny tianao atao. - Oprah Winfrey
Ataovy izay tsy maintsy atao mandra-pahafatinao ny tianao atao. - Oprah Winfrey…
Manjary izay inoanao ianao fa tsy izay eritreretinao na tianao. - Oprah Winfrey
Isika rehetra dia manaraka fitsipi-pitsipika izay mitarika antsika amin'ny fiainana. Mandritra izany fotoana izany rehetra ...
Tompon'andraikitra amin'ny fiainanao ianao. Tsy afaka mijanona manome tsiny olona hafa ianao amin'ny ffunctionanao. Tena mihetsika ny fiainana. - Oprah Winfrey
Ianao no olona tompon'andraikitra amin'ny fiainanao manokana. Raha hita ny zava-drehetra…
Izy io dia fahatokisana amin'ny vatantsika, ny saintsika ary ny fanahintsika izay mamela antsika hikaroka zava-baovao. - Oprah Winfrey
Ny fahatokisantsika amin'ny vatantsika sy ny saintsika ary ny fanahintsika no ahafahantsika mikaroka hatrany amin'ny fiainana vaovao.…